Haddii ay suurtogal tahay iska ilaali inaad xiriir jidhka/taabasho jir ahaaneed la yeelato dadka kale aan ahayn kuwa aad la nooshahay. Waxay taas micnaheedu tahay waxa ka mid ah in lagaala talinaayo inaad qabanqaabisid ama ka qeybqaadatid xaflad ama kulamada kale ee bulshada. Waa in sidoo kale laga fogaado waxqabadyada qaar aan la sameyn karin iyadoo aan masaafad dadka kale laga fogaanaynin, sida isboortiga la istaabanaayo ama daryeelka caafimaadka iyo is qurxinta oo aan caafimaadka xiriir la laheyn.
Iska ilaali inaad ka qeybqaadato, tusaale ahaan shirarka, riwaayadaha, bandhigyada, tabobarada isboortiga, kulamada/ciyaaraha iyo tartamada. Laakiin taasi ma khuseyso tabobarada isboortiga ee carruurta iyo dhalinyarada dhalatay 2005 ama wixii ka danbeeyey. Xiriirada dhowdhow ee daruuriga ah, sida tusaale ahaan booqashooyinka daryeelka caafimaadka iyo baaritaanka caafimaadka, ayaan ku jirin talooyinka la soo jeedinaayo. Waxaase mihiim ah in laga fikiro in qofka leh calaamado laga yaabo inay covid-19 yihiin uu ka fogaadaa dhamaan xiriirada dhowdhow ee dadka kale oo dhan.
Ka fogow sameynta safarada aan daruuriga aheyn. Safarada gobolka gudahiisa ama gobollada kale dhexdooda ah ayaa gacan ka geysan kara korodhka fiditaanka cudurka maadaama oo badanaa lala kulmo dad cusub, taas oo keeneysa in silsilad cusub oo infegshanka ahi bilaabanto. Waa in sidaas darteed, ilaa inta ay suurtogal tahay, laga fogaado safarada noocaas ah. Talodu waxa ay sidoo kale khuseysaa safarada lagu aadaayo ama lagaga imanaayo gobollada kale. Talodaas ayaan ujeedadeedu aheyn in dadka laga hor istaago inay tusaale ahaan aadaan shaqo, waxbarasho/hawl ama daryeelka loogu baahan yahay in goobta la joogo.
Waxqabadyada iyo loo shaqeeyeyaasha waxa inay qaadaan talaabooyin si uu qof kastaa ugu raaci karo talooyinka guud ee kor ku xusan. Talaabooyinka loo shaqeeyayaashu waxay noqon karaan ku dhiirrigelinta shaqaalaha inay guriga ku shaqeeyaan, iyadoo la siiyo fursado dheeri ah oo ay guriga kaga soo shaqeynayaan, iyo in dib loo dhigo safarada shaqadu dadka dirto, shirarka iyo kulammada kale ee jir aheed/tooska ah. Waxqabadyada kale waxay dhimi karaan tirada soo booqdayaasha ah ee isla waqti joogta, lagu beego saacadaha furitaanka, oo la soo bandhigo fursadaha waxqabadka dhijitaalka ah.
Uppdaterades 27 nov 2020 11:49